कुनै पनि बहानामा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठीत गर्न नपाइने सरोकारवालाहरुको भनाई | Sagarmatha Chautari
कुनै पनि बहानामा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठीत...
कुनै पनि बहानामा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठीत गर्न नपाइने सरोकारवालाहरुको भनाई
काठमाडौं । प्रेस स्वतन्त्रता वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठीत गर्ने कुनै पनि प्रकारका विधेयक स्वीकार्य नहुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘प्रेस स्वतन्त्रताको वर्तमान अवस्था र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले प्रेस स्वतन्त्रतालाई राज्यले कुनै पनि बहानामा नियन्त्रण गर्न नपाइने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ पत्रकार सुरेशकिरण मानन्धरले समग्र पत्रकारिता क्षेत्रमा नै चिन्ता पैदा भइरहेको समयमा भाषिक पत्रकारिता क्षेत्र झनै चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । प्रजातन्त्र लोकतन्त्र आएपनि भाषिक पत्रकारिता क्षेत्रको विकास हुन नसकेको वरिष्ठ पत्रकार मानन्धरले बताउनुभयो । ‘भाषिक पत्रकारिताको विकासको लागि प्रजातन्त्र आएर नपुग्ने रहेछ । प्रजातन्त्रसँगै समावेशीता पूर्ण कार्यान्वयनमा गए मात्रै भाषिक पत्रकारिताको विकास हुनसक्छ’ मानन्धरको भनाई थियो ।
त्यसैगरी, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले सत्ता ढाल्न वा राजनैतिक स्वार्थले नभई विधेयक सुधार्नको लागि मात्र आफुहरुले विरोध गर्नुपरेको बताउनुभयो । सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर मात्र ल्याउने भनेकोमा कुनै पनि प्रकारको छलफल नगरेको प्रष्ट पार्नुभयो । दण्ड जरीवानाका केही बुँदाहरु हटाएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै उपाध्यक्ष पोखरेलले विधेयकमा अझै पनि आपत्तीजनक बुँदाहरु रहेको बताउनुभयो । पत्रकारको लागि लाइसेन्सको कुरा उठाएर पत्रकारको कलमलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको पोखरलले दावी गर्नुभयो ।
‘पत्रकारलाई चिनाउने उसको कलमले हो, लाइसेन्सले होइन । जसले लाइसेन्स दिन्छ, उसले फिर्ता पनि लिन सक्छ । लाइसेन्स भनेको राज्यले पत्रकारलाई नियन्त्रण नै गर्न खोजेको हो । यो खारेज हुनैपर्छ’ पोखरेलले माग गर्नुभयो । आवश्यक भएमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको आवाज उठाउँदै सडकमा उत्रिनुपरे पत्रकार महासंघ पछि नहट्ने प्रतिवद्धता पोखरेलले व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रेस काउन्सील नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले कतिपय अवस्थालाई नियाल्दा पत्रकारहरुले नै सरकारलाई विधेयक ल्याउन हौसला दिए जस्तो देखिएको बताउनुभयो । सामाजिक संजालको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग गर्दै, मनिट्राइज युट्यूब च्यानलबाट पैसा कमाउनकै लागि समाचार भन्दै अश्लिल सामग्रीहरु हालेर विकृती बढेको प्रति अध्यक्ष श्रेष्ठले आपत्ती जनाउनुभयो ।
तर पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठीत गर्ने प्रकारका कुनै पनि ऐन वा विधेयक भने ल्याउन नहुने पनि श्रेष्ठले भन्नुभयो । मिडिया काउन्सील विधेयकमा कसैको पनि गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने भनी उल्लेख गरिएको भन्दै पत्रकारले के गर्छ त भनेर प्रश्न समेत गर्नुभएको थियो । ‘ललिता निवास जग्गा अनियमितताको गोपनियता कसले सार्वजनिक गर्यो ? वाइडबडि प्रकरण कसले बाहिर ल्यायो ? सरकारले त कतिपय कुराहरु लुकाउन खोज्ला । त्यस्ता सूचनाहरु नागरिकसम्म पुर्याउने त पत्रकारले हो’ श्रेष्ठले भन्नुभयो ।